हिन्दुत्व मास्दै कम्युनिष्ट सरकार :: a1nepal.com.np
- मिलन विक्रम सिंह बस्नेत
धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दु धर्म मास्ने र कृश्चियानिटी फैलाउने हो ? वा हिन्दु संस्कारलाई विभिन्न बहाना बनाएर अन्य धर्मलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ? कि कम्युनिष्ट सरकारले धर्म मान्दैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको हो ?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन भए । राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्था निर्मूल र राजतन्त्रलाई विदाई गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका आन्दोलनमा जनता जितेका हुन् । व्यवस्था हारेको हो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट मुलुकले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्यो । त्यतिमात्र होइन सामाजिक परिर्वतनका रुपमा मुलुक धर्मनिरपेक्ष पनि भयो । जुन सनातन हिन्दुहरुको लागि अभिशाप हुन पुगेको छ । के धर्मनिरपेक्षता भनेको हिन्दुधर्म मास्ने र कृश्चियनलाई फैलाउने हो ? वा हिन्दु संस्कारलाई विभिन्न बहाना बनाएर अन्य धर्मलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ? कि कम्युनिष्ट सरकारले धर्म मान्दैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको हो ?
धर्म निरपेक्षता नाममा नेपालको पहिचान र हिन्दृ धर्मको अन्त्य गर्न खोजिएको आभास भएको छ । कथित कम्युनिष्ट र केही मंगोल भनाउँदाहरु हिन्दु निरपेक्ष नेपालको रुपमा बुझ्दै आएका छन् । जबकि, नेपालमा ८१% भन्दा बढी हिन्दुहरु छन् । उनीहरु संस्कार र विधि विधानमाथि राज्य धावा बोलेको अवस्था छ । सरकारले छानीछानी हिन्दु पर्वहरुको विदा कटौती गर्नुको सरासर हिन्दुको अपमान हो ।
धर्म निरपेक्षताको अर्थ संसारले बुझेको कि, राज्य वा सरकार कुनै पनि धर्मप्रति ‘निरपेक्ष’ वा अलग्गै रहन्छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा राज्यले कुनै पनि धर्मको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा लगानी गर्दैन । जुनसुकै धर्म सम्प्रदायले पनि आफ्नो धर्मको संरक्षण आफैं गर्नुपर्छ, राज्यले यसमा चासो दिँदैन । एउटा धर्म मान्नेले अर्को धर्मको सम्मान गर्दै आफ्नो धर्मको संरक्षण गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ, धर्म निरपेक्षताको । तर, आज नेपालमा धर्म निरपेक्षताको नाममा हिन्दुहरुले मान्दै आएका चाडपर्वको विरोध गरिँदैछ । त्यतिमात्र होइन सरकार उनीहरुले मान्ने पर्वहरुको विदा कटौती गरिरहेको छ । यसले के प्रष्ट गर्छ भने हिन्दु मासेर अन्य धर्मको प्रचार गर्ने अभिप्राय कम्युनिष्ट सरकारको देखिन्छ । के दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको उद्देश्यय हि हो ? ८१ प्रतिशतको अपमान गरेर यो सरकारले के गर्न खोजेको हो ? यस विषयलाई प्रतिपक्षी दलले पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय एकता र हिन्दू धर्म
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुष २७ गतेका दिन मनाइँदै आएको राष्ट्रिय एकता दिवसका दिनको विदा वाम सरकारले कटौती गरेको छ । टुक्रा टुक्रामा छरिएर रहेका नेपाललाई मिलाएर सुन्दर नेपालको निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गर्नु कुनै अपराध हो ? उनकै एकता कारणले आज हामी नेपाली भनेर विश्वभर परिचित छौ, उनकै अपमान किन ? उनले एकीकरण नगरेको भए आज नेपालको अस्तित्व के हुन्थ्यो ? वास्तवमै यो स्वतन्त्र परिचय विश्व मानचित्रमा रहने थिएन ।
नेपाललाई सनातन धर्मावलम्बीको केन्द्रविन्दुका रुपमा परिचय दिलाए, आप्mना कुलधर्महरु नछाड्नु भनी संस्कार सिकाए अनि विधर्मी ईसाईहरुले नेपाललाई दूषित पार्न नपाएको कारण असली हिन्दुस्थान त नेपाल रहेछ भन्ने सन्देश दिए, आफु हिन्दु भएता पनि सम्पूर्ण नेपालीको धर्मप्रति विभेद गरेनन् । सबै धर्म मान्नेहरुलाई एक आपसमा मिलाएर राखे, सबै धर्म मान्नेहरुलाई एक अर्काले मान्ने धर्मको सम्मान गर्न सिकाए र नेपाललाई ४ जात ३६ वर्णको फूलवारी भनेर समान व्यवहार गरे । त्यसको जन्मदिनमा राष्ट्र एकता दिवस मनाउनुको सट्टा उनकै सालिक भत्काउने र पुष २७ का दिन उनको फोटोमा थुक्ने कार्यक्रम राख्नेहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने हो । तर, तिनकै स्वर चर्को भएको छ । सरकार उनीहरुकै समर्थनमा छ । यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन्छ मुलुकका लागि ।
हिन्दुहरुले आदिमकालदेखि मनाउँदै आएका चाडपर्वलाई कम्युनिस्ट र केहि जनजातीका नेताहरुले अपहेलना गर्दै आएका छन् । पश्चिमाहरु डलरको प्रलोभनमा क्रिश्चियन धर्मलाई प्रचार–प्रसार गर्ने र सोझा जनतालाई त्यसमा प्रवेश गराउने नीति उनीहरुको छ । जबकि सनातन हिन्दू यहाँको जननी धर्म हो । जसको महत्व जति नै व्यख्या गर्दापनि अपूरै हुन्छ । यो कसैको प्रचार–प्रसार र पैसा लगानी गरेर खोल्ने कम्पनी जस्तो धर्म होइन । यस्तो धर्मका पर्वको विदा कटौती सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।
हिन्दूहरुको विशेष पर्व जनै पूर्णिमा, रामनवमी र वडा दशैँको विदा ओली सरकारले कटौती गरेको छ, त्यतिमात्र होइन दिपावलीमा खेलिने देउसीभैलो का लागि पनि नियम बनाइएको छ, तर, क्रिसमस मान्नेहरुलाई त्यस्तो कुनै वाध्यात्मक नियम छैन् । देउसी खेल्नलाई रातको ८ देखि ९ वजेसम्म मात्र पाइने र देउसी भैलोको गीत अत्याधिक सानो आवाजमा बजाउनु पर्ने नियम लादेको छ भने क्रिश्चियनहरुको क्रिस्मसमा रातको १२, १ बजेसम्म खुलेआम होहल्ला गर्दै हिँड्न पाउने, ठूलठूला आवाजमा गीत बजाउन पाउने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यसबाट पनि प्रस्ट देख्न सकिन्छ कि हिन्दू धर्मको अन्त्य र क्रिस्यन धर्मको संरक्षण गर्न वर्तमान सरकार लागिपरेको छ ।
गौहत्या, पशुबली, अधिकारकर्मी र सरकार
विभिन्न वहानामा हिन्दू धर्मको अन्त्य र क्रिश्चियन धर्मको संरक्षण गर्न नेपालमा क्ष्ल्न्इ को नाममा विदेशी दलालहरु हावी भएको तथ्य छर्लङ्गै छ । हिन्दु वाहुल्यता भएको मुलुकमा पश्चिमाले आफ्नो धर्म विस्तार गर्न विभिन्न अस्त्रको प्रयोग गर्दै आएका छन् । २०७२ सालको महा भुकम्प स मानवीय संकटका बेला समेत उनीहरुले धर्म ठूलो देखेँ मानवताभन्दा । भुकम्पको कारणले गाँस, वास, कपास र आफन्त गुमाएको पीडा आलै थियो । तर, पश्चिमा दलालहरुले यसलाई धर्म विस्तार गर्ने राम्रो अवसरको रुपमा यसलाई प्रयोग गरे । विपद्का बेला गाँस, वास र कपासले मलमपट्टि लगाउनुपर्नेमा क्रिश्चियनका दलालहरुले सहयोगको खोल ओडेर धर्म प्रचार गरे । पिडितलाई सहयोग गर्ने वहानामा सहयोगको पोकाभित्र बाईबल राखेर बाँडने काम लज्जाजनक थियो तैपनि उनीहरुले त्यो कार्य गरी छाडे ।
हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्ने कुनै पनि दलको एजेण्डा थिएन तर यो एकाएक गरियो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण नेपाली सडकमा भएको मौका उठाएर धर्मनिरपेक्षको बीउ रोपियो । यसरी नै जहाँनेर मौका मिल्छ, आप्mनो धर्म लाद्ने काममा अहिले पनि पश्चिमाहरु नेपालमा सक्रिय छन् । सरकारमा बसेका कम्युनिष्टहरु, पशु अधिकारकर्मीहरु अनि आईएनजिओहरु पश्चिमाहरुको यस अभियानलाई सफल बनाउन सक्रिय ढंगले योजना बुनिरहेका छन् । आज नेपालको राष्ट्रिय जनावर तथा हिन्दूहरुले माता लक्ष्मीको रुपमा मान्दै आएको गाईलाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर संसद भवनमा र सामाजिक संजालमा खुलेआम अभिव्यक्तिहरु आईरहँदा ‘वरिष्ठ’ ओली सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिदैन । हिन्दूहरुले गाईलाई तिहारमा लक्ष्मीको रुपमा पुज्ने गर्दछन् जसलाई काटेर मासु खान पाउनुपर्ने अधिकार संविधानमा नै लिपिवद्ध गर्नुपर्छ भनिरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । विधि र परम्परा कुनै व्यक्ति र संस्थाको पेवा होइन यो सबै समाजको गौरव हो । हिन्दुधर्म मान्ने विधि–विधान परिपालना पनि गर्ने तर त्यसको संरक्षण नगर्ने यो सरकारको शैली फिटिक्कै भएन ।
हिन्दूहरुले विभिन्न चाडपर्वमा पशुवली दिने प्रथाको तीव्र विरोध गर्ने पशु अधिकारकर्मी आज कुन दुलोमा पसेका छन् ? जब दशै आउँछ, जब गडीमाई मेला सुरु हुन्छ तब मात्रै दुलोबाट निस्केर मिडियामा उठाउन थाल्छन् पशुअधिकारका कुरा । अनि के क्रिसमसमा पशुहरुको हत्या नहुने हो र ? पश्चिमा मुलुकहरुमा पशुहत्या नै हुदैन ? यस विषयमा पशु अधिकारको वकालत गर्नेहरु किन चुपचाप छन् । यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? हो हिन्दुका पनि कतिपय रितितिथी समय सापेक्ष नहोलान त्यसलाई सुधार्न कोही वाधक छैनन् । तर, एउटाको संस्कार मासेर अर्काको स्थापित गर्ने कुराको सर्वत्र विरोध हुन्छ नै । यो सबैपक्षले बुझनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, बुद्ध धर्म अँगालेको तामाङ जातिका केहि मानिसहरुले गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर उफ्रिएको देख्दा बडो गजब लागेको छ । भगवान बुद्ध जसले अहिंसाको पाठ सिकाए उनकै मार्गलाई अपनाएकाहरुबाट जीव हत्या गर्न पाउनु पर्ने माग ! यो कस्तो बिडम्बना । के यी गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्दै कराउनेहरुलाई भगवान बुद्धको शिक्षाले छुँदैन कि यिनीहरुले गाई खानको लागि आप्नो धार्मिक आस्था नै फेरिसके ?
इराकमा आइएस जिहादी समूहको अपहरणमा परेका ३९ भारतीयको हत्या सबै धर्मको सम्मान गरौँ : काकासाहेब श्रीलंकामा मुसलमानविरुद्धको दङ्गाका कारण सङ्कटकाल २५ लाखको लट्री परेको भन्दै IMO बाट ठगी गर्ने पक्राउ इजरायलमा गुरु माता राधिका दासीजीद्वारा आध्यात्मिक प्रवचन इजरायलमा कार्यरत ववी गुरुङको भ्यालेन्टाइन विशेष म्यूजिक भिडियो बजारमा पारिवारिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो सफल पार्न नसकेको भन्दै माफी मागे गजुरेलले ल्होछार साँझ २०७४ मा सहभागिता जनाउन कलाकारहरुको अनुरोध एनआरएनए इजरायलद्ववारा दूतावासमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश एनआरएन इजरायलदावारा ‘हरितालिका तीज उत्सव २०७३’ सम्पूर्ण इजरायलवासी नेपालीहरुको साझा कार्यक्रम घोषणा
← घुस लिँदै गर्दा विद्युत् इन्जिनियर चौधरी पक्राउ	सेनामा जागिर लगाईदिन्छु भन्दै १ करोड भन्दा वढि ठगी गर्ने चारजना पक्राउ →